Kuuriyada Waqooyi oo tijaabisay 'gantaallo ay ridadoodu gaaban tahay' – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Kuuriyada Waqooyi oo tijaabisay ‘gantaallo ay ridadoodu gaaban tahay’
Maxaan ka ognahay tijaabadan ugu dambaysay?
Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay gantay gantaallo xiriir ah tan iyo markii Mr Trump iyo Mr Kim ay shir ay bishii Juun yeesheen ku heshiiyeen in dib loo bilaabo wadahalladii lagu baabi’inayay nukliyeerka dalkaasi.
Image captionKuuriyada Waqooyi ayaa todobadyadii la soo dhaafay waxa ay qaadday tijaabooyin xiriir ah
Muxuu Kim Trump u qoray?
Maamulka Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa uu muujiyay sida uu uga careysan yahay dhoolatuska milateri ee ay wadajirka u sameeyeen Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, iyadoo sheegtay in taasi ay xadgudub ku tahay heshiisyadii ay la galeen Mr Trump iyo Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in.
Maxaan ka ognahay dhoolatuskii milateri ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed?
Dhoolatuska weyn ayaa waxa uu bilaaban doonaa 11 Agoosto, waxaana bilowday diyaargarow aanan sidaas u buurnayn.
Dhoolatuska ayaa badana lagu hagaa kumbuyuutarrada aad ayeyna uga hooseeyaan kuwii hore ee ay wada sameyn jireen Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, kuwaas oo ay Waqooyigu u arki jirtay inay daandaansi yihiin.
Todobaadyadii la soo dhaafay, Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay tijaabisay wax saraakiisha Koonfurta ay ku sheegeen inay u muuqdeen nooc cusub oo gantaallada ridada gaaban ah, iyadoo midkii hore la tijaabiyay Talaadadii.
Gantaallada ayaa waxaa la ganay 25 July – kuwaas oo mid ka mid ah uu jaray ku dhawaad 690 km – waxa ayna ahaayeen kuwii ugu horreeyay ee ay Kuuriyada Waqooyi riddo tan iyo markii Mr Trump iyo Mr Kim ay yeesheen kulan aanan la sii diyaarin oo bishii Juun ka dhacay dhulka milateriga ka caaggan ee kala qeybiya labada Kuuriya.
Previous articleDowladda Somalia oo walaac ka muujisay doorashada Jubaland
Next article3 Talo oo Ku Aaddan Sida Ugu Wanaagsan ee Loola Dhaqmo Lamaanaha Xanaaqa Badan